Välkommen att vaccinera dig mot covid-19! - somaliskaThe content concerns Gävleborg
Tallaalka waa habka ugu fiican oona ugu sugan oo qofku ugu badbaadi karo cudurka [Covid-19] ugana badbaadi karo in dad kale u ku dhaco. Waxaad kaloo xarumaha daryeel-caafimaadeedka ka caawinaysaa in ay daryeelaan dhammaan bukaan-socodyadii, oo safmarka dartiisa daryeelkooda dib loo dhigay, waxaad kaloo kaalin ka geeysanaysaa sidii bulshada ay mar labaad si caadi u shaqaysan lahayd.
Daawooyinka tallaalka ee dalka Iswiidan laga aqoonsaday, waxaa laga hela badbaadin heer sare ah. Haddii lays barbardhigo ku xannuunsashada cudurka [Covid-19] iyo tallaalka waxaa aad u darran oo halis ah u xannuunsashada tallaalka dartiis.
Ku tiri ku tireen badan ayaa tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago dhacdo. Sida tusaale, in tallaalka u saamayn ku yeesho fursadda uur-qaadista, ama in daawada laga sameeyay maaddooyin aan la ogayn waxa ay yihiin. Ku tiri ku tireenyada noocaas ah ma laha wax gundhig ah.
Saddexda waddo ee tallaalka lagu helo waxaa weeyaan:
Adigoo adeegsanayo barta internetka 1177.se/Gavleborg qabso ballanka tallaalka. Qof kale ayaa ka codsan kartaa in u ku caawinno haddii aadan af-iswiidisha garanayn.
Af-iswiidish ama af-ingriiisi ballanka ku qabso adigoo waca 026-15 03 00, ama qof kale ka codso in uu ku waco.
Booqo goobaha tallaalka ee aan loo baahnayn in kahor ballan la qabsado [drop-in]. Xaalladdaas ballan qabsasho looma baahna. Warbixi ku saabsan goobaha [drop-in] ka aqriso barta internetka 1177.se/Gavleborg. Haddii aadan af-iswiisdishka garanayn waxaad warbixin ku saabsan taariikhda iyo saacadaha goobaha tallaalka ay furan yihiin waydiin kartaa rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay.
Elina Sorri, istratejiyada is-gaarsiinta, daryeel- caafimaadeedka iyo bukaanka, Gobolka Gävleborg, Region Gävleborg